Umsebenzi weefayile zomsebenzi nge-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/ArcGIS-ESRI/Iifayile zohlobo lwe-AutoCAD
Iifayile zobume, ezaziwa njengeifayili .shp, ziya kuba ifomathi ngokwetekhnoloji kodwa asinakukuthintela ukuba ziye zenziwa zaziwa njengeArcView 3x. Esi sizathu sokuba zisasetyenziswa ngokubanzi, kangangokuba uninzi lwamaqonga e-geospatial aphuhlise iindlela zokusebenza kunye nawo. Okubandakanya gvSIG inako bafunde kwaye bahlele.
Enye indlela ebisetyenziswa ngokubanzi ngaphambili yayikukuthumela ngaphandle kwe-ESRI ukuya kwi-dxf, kunye nokusilela kokulahlekelwa yidatha yethebhu. Kule meko, siza kubona ukuba sinxibelelana njani nezi velociraptors se benzisa AutoCAD I-AutoCAD Imephu, ndafunda ngale nkqubo ngempendulo elula esuka kwi-Txus kwikomiti yeCartesia.
1. Ayisiyiyo nayiphi na i-AutoCAD
Ifayile yesimo iqukethe ijometri, equkethwe kwifayile yokwandisa .shp, ngoko ke idatha yedatha equlethwe kwifayili ye .dbf kunye nesalathisi edibanisa nabo, yiyo .shx.
Ukufunda ifayile yalezi zifunwa yiMaphu ye-AutoCAD, okanye i-Civil 3D; Kuyafaneleka ukucacisa ukuba akufani Bentley Imephu okanye gvSIG akunakwenzeka ukuba ufunde ifayile ngokufanelekileyo kodwa kusebenza ngokuxhamla kwe-FDO.
Umzekelo endiwenzayo nge-AutoCAD Civil 3D 2008.
2 Ungayifaka njani ifayile .shp
Ukwenza oku kufuneka ukwenze kwimenyu:
"imephu / izixhobo / ukungenisa", kukho ivumela ukuba ukhethe zombini .shp kunye neefayile ze-E00 kunye neenguqulelo zeziko lokuqala lokusebenzela i-ArcInfo.
Ikwavumela ukungenisa elizweni kwiinkqubo ezinje ngeMapinfo (.mif .tab) kunye neMicrostation Geographics (.dgn). Kubonakala kum ukuvulwa okuhle kwe-AutoCAD kwiifomathi zangaphandle, kuba xa ungenisa kwi-dgn ngale ndlela kunokwenzeka ukubamba i-mslink kunye nolunye ulwenziwo olufana nokuxhaphaza izinto ezintsonkothileyo kunye nokuguqula iiseli ukuba zibhloke ngaxeshanye.
Emva koko iphaneli icela ukuba i-projection ibelwe kwaye kungenzeka ukuba angenise indawo enye kuphela.
Kwakhona kunokwenzeka ukucacisa ukuba iipoloni ziguqulwa kwiipollines ezivaliweyo.
3 Indlela yokuthumela kwi .shp
Ukuthumela ngaphandle le nkqubo iyafana, "imephu / izixhobo / ukuthunyelwa ngaphandle", emva koko ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kufuneka kwenziwe ngokwahlukeneyo, imigca, amanqaku, iipoligoni kunye neetekisi. Ukhetho lunokwenziwa ngesandla, ngamanqanaba okanye ngokwezigaba zeeklasi kwaye ukuba uchaze ii-topologies, kungcono.
Kwakhona kuyimfuneko ukuchaza iimpawu zezinto eziza kukwakha iikholomu ze-dbf, ukubonakaliswa kwefayile yokuphuma kunye nokuguqulwa kwee-polylines ezivaliweyo kwiipolgoni.
Kulo mbandela yokungenisa nokuthumela ngaphandle kukho enye indlela yokwenza iprofayili ukuze ingachazi iimeko ngexesha ngalinye, oku kuza kugcinwa njengefayili ye .ipf enokuthi ilayishwe rhoqo ngexesha inkqubo iya kwenziwa.
Ukuqaliswa kweGoogle Earth 5.0
UMiguel 2 uthi:
Mva ntambama, ndithandabuzo.
Ndivule ifayile ye .shp kwi-AutoCad Civil 2008, evela kwindawo enkulu eneepakheji ezininzi ezahlukeneyo.
I-1.- Ukuba ndifuna ukwazi indawo yelenqe, i-Civil iyayiphonsa ngaphandle kwam ingxaki, kodwa ukuba ndikhetha ezimbini okanye ngaphezulu, kubonakala ngathi ubuso bunzima *. Ingaba kukho nayiphi na indlela yokuba iKad iyenze isabelo?
I-2.- Kule mihlaba, kwiimeko ezininzi kukho uhlobo olulodwa lwezityalo ngaphakathi (umdiliya kunye nomthi we-alimondi, umzekelo). Ingaba kukho nayiphi na indlela yokwahlula eso siqendu kwiindawo ezifihliweyo kwaye ubuyisele kuyo le ndawo?
Ukungalunganga. Awunakho ukuhlela ubume ngemephu ye-AutoCAD, yidibanise kuphela. Ungayihlela ngayo nayiphi na i-qgis okanye i-arcgis, ngokulula nje kulula ukuyisebenzisa.
Ndingathanda ukwazi ukuba iMephu ye-Autocad ivumela ukujoyina iimilo ezimbini (ezineendawo ezifanayo zetafile) kwenye. Umyalelo wokujoyina wongeza iiseli zetafile, kodwa uyaziphindaphinda nangona zibizwa ngokufanayo ...
EZIHLANGILEYO! NDINGENAKUBA UKUZIWA KANJANI INDLELA ENGANAKUYA KUFUNA UKUFUNA UKUPHILA KWI-PLANE YOMASIPALA WENKQUBO YOKWENZA I-SHAPEFILE? YIXESHA LOKUQALA. I-COST INDLELA ONGAKUBA KWI-DOLLARS OKANYE BOLIVARS. NDIYA
Ngaba umntu uyazi ukuba kukho nawuphi na umyalelo ukuba ifayile ye-dwg i-3d, ingayithunyelwa ngaphandle kwaye i-3d nayo? Ukuba le ntsebenzo yenziwa ngomyalelo oqhelekileyo wokuthumela ngaphandle kwi-sig, iqhuba yonke imigca ukuya kwi-0.
Guqula izichazi zibe yimizobo. Yonke inkqubo ihlala ine-plugin yaloo nto.
Ndifuna indlela yokuthumela ngaphandle kwi-Autocad Imephu, i-Kosmo okanye i-GvSig ngamanqaku athile ukuze zibonwe kwi-Autocad evamile.
Ndiyicinga umsebenzi wokuchaza izihloko ezinomdla kakhulu esingazi, mbulela ixesha lakho nobulumko.
Nangona ndihlala ndindwendwela le webhusayithi, khange ndiyiqaphele le posi ... ke emva kweenyanga ezi-3 ndigqabaza, nangona ndicinga ukuba kufanele ukuba uyayazi le ngongoma 😀
Kuhle ngokungenisa / ukuthumela ngaphandle kwiMephu ye-AutoCAD ... kodwa into "echanekileyo" kukusebenza kunye ne-shp kwi-NATIVE FORMAT, oko kukuthi ... AKUNYE!...
Ukusuka kwi-AutoCAD Map Task Pane (ukusuka ku-2007 ukuya phezulu) unethuba lokunxibelelana ngokuthe ngqo kwiindawo ezahlukeneyo zedatha (i-wms, i-oracle, i-wfs, i-raster kunye [oh!] Shp) ...
Uya kwiDatha / Xhuma kwi-data kwaye uyenziwe! Ukuhlonipha njengolu hlobo lwefayile ye-shp, kunokwenzeka ukubonisana, ukuhlalutya, ukuhlela kwaye yonke into isesimweni se-shp..
Nantsi umfanekiso womyalelo kumbuzo
Ndiyabulela, sele ndiyilungisile.
Umele uwele i-Autocad, kwaye usebenzise imephu ye-Autocad (i-Civil 3D eyakhelwe kuso)
Kwaye ungabhekisela kuxhumano lwe-FDO, ukuba nangona andiqhelekanga ukuyisebenzisa, ndiyaqonda ukuba isebenza kwifayile ye-shp, kwaye akufuneki ukungeniswa 😉
Enkosi ngolwazi. Sele ndibekile ityala.
Ngaba unokubulela umthombo wale "fumana" ...